विषय होइन विवेक साध्य हो | गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक
विषय होइन विवेक साध्य हो
| 484 Views | Published Date : 24th December 2017 |
विषय आफैमा साध्य होइन । विषयलाई सफलता उन्मुख गराउने विवेक साध्य हो । त्यसैले कुनै पनि क्षेत्र चाहे त्यो सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्र किन नहोस् यदि विषय वस्तुको गाम्भीर्यता र यस्ले पछि पर्ने सम्भावित खतरलाई समयमै समाधान गर्ने उपाय सुझाइएन भने यसले दूरगामी असर पु¥याउन सक्छ । तसर्थ वर्तमान समयमा नेपालको राजनैतिक वृत्तचित्रमा सलबलाई रहेको विषयवस्तुलाई आपसी समझदारी र दुरदृष्टि राखी समाधान खोजिनुपर्दछ । कुनै पनि पार्टीले हठ वादी चिन्तन बढाउनु हुँदैन । हिजो सबै मिलेर जसरी संविधानको रुप तयार गरे गराए अब पनि प्रजातन्त्रको निष्ठा र चरित्रलाई कायम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ । नेपालको संविधानमा उल्लेखित बुँदालाई आफ्नो पक्ष पोषण गर्ने गरी कोही कसैले पनि व्याख्या गर्ने गराउनु हुँदैन । हो राजनीतिमा पक्ष विपक्ष हुन सक्ला, चुनावी मैदानमा जाँदा एक अर्कालाई विविध किसीमले सम्बोधन गर्न सकिएला तर जब निर्वाचन सम्पन्न भइसक्छ । त्यसबाट प्राप्त उपलब्धीलाई सबै स्वीकार्न जरुरी हुन्छ ।
निर्वाचित प्रतिनिधि हाम्रा साझा हुन् । यहाँ कोही कसैको लागि नभई सिङ्गो मुलुकको जिम्मेवारी उनीहरुमा छ भन्ने विश्वास राख्नु पर्दछ । लोकतन्क्रलाई विश्वास गर्ने कुनै पनि दल विशेषले लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने काम गर्नु हँुदैन । अहिले देश राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यायदेश जारी गर्ने नगर्ने बीच विवादमा फस्दै गएको छ । एक पक्ष यस्तो हुनै पर्दछ भन्दै छन् भने अर्को पक्ष यसो हुनुहुँदैन भन्दैछन् । यो अध्यादेशको बारे हिजो संसद रहँदा पनि विवादमै रहेको थियो । अहिले झन् यसको पक्ष र विपक्ष भएर बहस चलिरहेको छ । यस अवस्थामा यदि संयम र धैर्यता राजनीतिज्ञमा भएन भने निश्य पनि यसले दूरगामी असर नपु¥याउला भन्न सकिन्न । तसर्थ समय परिस्थिति अनुसार जन अनुमोदित शासन प्रणालीलाई शिरोधार्य गर्नु सबैको जिम्मेवारी बढेको छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कसैले पनि यसको पक्ष विपक्षमा नबोली संविधान प्रदत्त र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने गराउने कुरामा बढी विवेक प्रयोग गर्ने बेला आएको छ । कानूनी राज्यको अवधारणा अनुसार राज्य संचालन हुनुपर्दछ भनि वकालत गर्ने कानूनका व्याख्याताले पनि समय परिस्थिति जन अभिमत र संविधानले दिन खोजेको आसय विपरित पक्ष विपक्ष हुने बेला भएको छैन । वर्तमान समयमा जनताले खोजेको अभिमत अनुसार संविधानलाई गतिशील बनाउने वातावरण बनाउनु पर्दछ । अहिले कानूनी सल्लाहकार देखि राजनैतिक विश्लेषकसमेत दुई कित्तामा उभिएको अवस्था छ ।
जन अनुमोदित शासन पद्धतिभन्दा पद र प्रतिष्ठालाई सर्वोपरी ठान्ने प्रवृत्ति झन् विकराल रुपले झांङ्गीर्दै गएको छ । लोकतन्त्रको नाममा नीजितन्त्रले प्रसय पाउन खोजेको आभाष देखिदैछ । समयको सदुपयोग गर्ने नाममा राज्यको ढिकुटी माथि खेलवाड गरिन थालेको समाचार बाहिर आउँदै गरेको छ । प्रशासनिक संयन्त्र अन्यौल अवस्थामा छ । नियुक्ति प्रक्रियादेखि अन्य कुरामा समेत एकाधिकारवादी चिन्तन हावी भएको अवस्था छ । जनतामा सार्वभौम अधिकार छ भनेर पनि हिँड्दै जाने अनि जनअनुमोदित शासन व्यवस्था कायम गर्ने कार्यमा विभिन्न बखेडा झिकी आफैले प्रजातन्त्रप्रति अविश्वास बढाउने वास्तवमा यो सुहाउने विषय होइन । यसले लोकतन्त्रमाथि नै खतरा निम्तिन सक्छ । भोलि केका लागि जन अनुमोदन ? केका लागि निर्वाचन ? आफ्नै हठवादी चिन्तन नछाड्ने हो भने केका लागि लोकतन्त्रको नारा लगाउने भनि टिकाटिप्पणी बढ्न गयो भने यसले कस्तो रुप लेला ? कानून साधन हो साध्य होइन यसर्ला साध्य बनाउने भनेको विवेक हो । यो कुरा जान्दा जान्दै पनि आफैले निर्माण गरेको स्वतन्त्रतालाई आफैले बन्धक बनाउने चरित्र राजनीतिज्ञलाई सुहाउने विषय होइन । कानूनी राज्यको सिद्धान्त बोकेर अघि बढेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा अहंवादी चिन्तन बढ्ने स्वाभाविक हुँदैन । हुन सक्छ, विचार फरक फरक होला काम गर्ने शैली फरक फरक हुन सक्ला तर लोकतन्त्रको सिद्धान्त फरक फरक हुनसक्दैन । पद र प्रतिष्ठा सधै एउटै छत्रमा रहिरहन्छ यो गलत मानसिकता हो ।
अर्को कुरा पद र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने बाटा फरक फरक हुन सक्ला । पद फरक हुन सक्ला तर राष्ट्रिय जिम्मेवारी फरक हुन सक्दैन । किनकी सबैले आफ्नो आफ्नो स्थानमा तोकिएको जिम्मेवारी बहन गर्दा आफ्नो दायित्व समेत बोध भएको हुन सक्छ तर राष्ट्रिय स्वाभिमान बचाउने समयमा सबैको एउटै जिम्मेवारी र दायित्व रहेको हुन्छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको मियो हो । यसलाई सम्मान गर्नु सर्बैको जिम्मेवारी हो यसो भएपछि ठकि अन्यथा वेठीक भन्नु शासन अधिकार लम्ब्याउनु बाहेक अरु केही नहुन सक्छ । र यस्तो विचार संप्रेषण हुनु यो कदापी सुहाउने विषय होइन । वर्तमानसम्म देखिएको राजनैतिक दृश्यलाई हेर्दा पद र प्रतिष्ठा बिना बाँच्न नचाहने मानसिकता बढेको देखिन्छ । जन अनुमोदित शासन व्यवस्था विपरित आचरण र व्यवहार प्रदर्शन गर्नु भनेको अहंवादी र सर्वसत्तावादी सोच बढाउनु हो ।
त्यसैले यसतर्फ सबैको ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी छ । यदि कसैले निश्चित समयको लागि उसको विचार अनुसार लोकतन्त्रमा आधारित शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न पाउँछ भने त्यसको परीक्षा नजिक आयो भन्ने सोच गरी उसलाई काम गर्ने अवसर दिनुपर्दछ । हुनसक्छ त्यस बेला आफू कमजोर अवस्थामा गुज्रनु पर्ला तर एउटा कुरा सोच्नै पर्छ त्यो समय लामो हुँदैन । यस्तो अवसर पुनः दोहोरिएर आफ्नो पोल्टामा पनि पर्न सक्छ । बरु एउटा कुरामा सावधान रहनु पर्दछ आफूले आफैलाई निखारेर लैजाने बुद्धिमत्ता कार्य गर्न छोडनुहुँदैन । जनताको घर दैलोमा पुगेर प्रजातन्त्रको मर्म र परिभाषा बुझाउँदै विकासका हर पहलुमा आफ्नो सक्रिय सहभागीता जनाउनु छोड्नु हुँदैन । कसैले केही समय शासन ग¥यो भने आकाशै खस्छ भन्ने सोच राख्नु हुँदैन । यो संकृण मानशिकता हो । संकृणताले कहिलै पनि राजनैतिक सफलता प्राप्त हुँदैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राजनैतिक सफलता लिनु छ भने जनतार्ला सर्वोपरी ठान्नुपर्दछ ।
राजनीति गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले चुनौतिलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गरी आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनु पर्दछ । अहिले लोकतन्त्रवादी र बाम गठबन्धनबीच जो दोहोरी चलिरहेको छ यसले देशको राजनैतिक धार कहाँ पुग्ने हो गन्तव्य विहीन हुने त होइन । त्यसको हेक्का राखी म मरे डुमै राजा भन्ने चरित्र प्रदर्शन गर्नु हुँदैन । बरु त्यसको साटो कहि कतै आफूले बनाएको संविधानमा लेखेको र लेख्न छुट भएको यो यो कुराले लोकतान्त्रिक बहुदलीय शासन व्यवस्थामा यस्तो अवरोध हुन गयो यसलाई यसरी फुकाउ भनि समझदारीपूर्वक अघि बढ्नु पर्दछ । हलो अड्काइ गोरु चुट्ने उखान चरितार्थ गर्नुहुँदैन । एकल संक्रमणीय र बहुमतीय बीच आपसी खिचातानी गरी हिलो छ्याप्ने काम गर्नु गलत मानसिकता हो । आफ्ना अनुकुल भए समर्थन नभएर विरोध गर्ने मानसिकता बढाउनु भनेको मौकामा चौका हानी आफ्ना भाइ भारदारलाई सुविधा दिई स्वार्थसिद्ध गर्ने कार्यमा डुब्नु जस्तो हो । भोलि फेरि यस अवस्थामा गरेका निर्णय उल्टेर आफैप्रति सोझिदै जान थाल्यो भने यसले निश्चय पनि राम्रो प्रतिफल दिँदैन ।
विषयान्तर भई विवेकलाई केवल स्वार्थमा परिपोषण गर्न खोज्ने तथा निश्चित विधि र प्रक्रिया नपु¥याई काम गर्न खोज्ने प्रवृत्ति आफैमा घातक हुने हुँदा यसतर्फ सबैको ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी छ । त्यसैले विषय साधन हो साध्य होइन यो विषयलाई सफलता उन्मुख गराउने विवेक साध्य हो भनि मानसिकता राखी आफूलाई प्रस्तुत गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । समयले पनि यही खोजिरहेछ र आवश्यक पनि छ । अस्तु ।